Devozione del giorno: il tesoro delle indulgenze | PREGHIERA&NEWS
Otionbọchị nke ụbọchị: akụ nke ime mmụọ
Paolo Tescione	Edere ya November 7, 2020 November 7, 2020
1. Akụ nke Indulgences. Jisos onye puru iji otu nkpuru obara gbaputa nde mmadu, wuputara ihe nile site na amara na oke ruru. Nnukwu mbubata nke a, n'ihi na enweghị oke, nke sitere n'uru nke ndụ, oke na ọnwụ nke Jizọs nke ọ chọrọ ijikọ uru nke Meri na nke ndị nsọ ndị ọzọ, bụ nnukwu akụ ime mmụọ nke Churchka nwere ike ịtụfu maka mkpụrụ obi anyị.
2. Ihe Dị Oké Mkpa nke Indulgences. Chee maka ọnụọgụgụ nke mmehie gị na ịnwụ anwụ; ị nwere ike ịmata ogologo na ike ndọda nke nchegharị nke Chineke chọrọ maka ụdị mmehie ọ bụla? You mara afọ ole Purgatory ga-ama gị ikpe? Na-atụgharị uche na imechu mmadụ ihu ọma nwere ike ịtọhapụ gị na afọ Purgatory; nchikọta ihe nwere ike inye gị nsogbu niile; na nke a, etinyere a mkpụrụ obi na pọgatrị, nwere ike ịkwụ ụgwọ ya niile ụgwọ! Ndi afo eyenyene udọn̄ ke ndinyene ediwak owo?
3. Ọnọdụ maka Indulgences. Tụlee otu ị ga-esi kpachara anya iji mezuo ọnọdụ ndị dị mkpa maka ịzụta Indulgences, ka ị ghara idafu akụ dị mfe dị otú a: 1 Celsius ịnọ n'ọnọdụ amara; 2 ° nwere ebumnuche nke ugbu a ma ọ bụ nke ịchụso Indulgences; 3 ° Iji obi uto wee rụọ ọrụ nke onye nyere Indulgences. Hụ ma ị gbasoro ụkpụrụ nduzi ndị a. Nwee ebumnuche mgbe niile ị ga - enweta.
OMUME. - Gụghachi omume okwukwe, olile anya na afọ ọma; tinye Indulgence, nke bụ afọ 7 na kwarantaini asaa, na mkpụrụ obi na pọgatrị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na ọchịchọ gị inwe nchegbu banyere ihe ndị ọzọ na-eche banyere gị. Mara na Chineke chọrọ ka ị dịrị ndụ eziokwu
Next Post → Post ozo:Pope Francis nyere nkpuru obi maka ndị bishọp Kadịnal 169 nwụrụ anwụ